Nhau - Ongorora Nyaya Huru Diki Dzinoda Kudzorwa Mukugadzirwa kweiyo Simbi Simbi Kukanda
Wongorora Ongororo Mbiri Huru Dzinoda Kudzorwa Mukugadzirwa kweiyo Simbi Simbi Kukanda
Kuumbwa kwekupedzisira kwe castings kunonyanya kuumbwa nekutonhora uye solidification yesimbi simbi. Mukugadzirwa kwekukanda, kana iko kwekukanda kusiri kugona, mhando yeanokanda ichave iri kunze kwemutsara, izvo zvinozokanganisa mashandiro ebasa revatambi uye nehupenyu hwebasa revanokanda. Naizvozvo, zvinhu zviviri zvekutonga zvinofanirwa kubhadharwa kutarisisa mukugadzira nzira yekugadzira.
(1) Kukanda kwehutatu kurongeka uye pamusoro peyakaomarara kutonga
Mumunda wekugadzira kwazvino, izvo zvinodiwa kuti zvive nemhando yepamusoro uye mhando yeanokanda ari kuramba achikwira uye achikwirira. Iyo yepedyo-mambure chimiro tekinoroji yekukanda yakachinja echinyakare pfungwa yekuti castings inogona kungopa mabara. Chinangwa ndechekuderedza kushandiswa kwemidziyo, kushandiswa kwesimba, kushandiswa kwevashandi, uye kugadzirisa zvigadzirwa. Iyo yemukati neyekunze mhando yekambani inovavarira kumusika uye kugona kwakanyanya. Nekudaro, nekuda kwesimba uye kurambidzwa kwezvakawanda zvinhu, iko kweyekuita kururamisa uye pamusoro pekuomarara kwekukanda kwakaoma kudzora. Castings inoumbwa mune yemvura fomu. Iyo ine yakasarudzika mikana yekuwana padyo-mambure chimiro. Panyaya yemamiriro, iyo mhango yemukati uye chimiro chemakanda zvinoumbwa panguva imwechete nekukanda nzira kuti dzive padhuze nechimiro chekupedzisira chechikamu, kuitira kuti maitiro nemaitiro egungano aderedzwe; Panyaya yekukodzera kuenzana uye nepamusoro pehunhu, kuraswa kunogona kuve padyo nezvinodiwa zvekupedzisira zvechigadzirwa, nemuganho kana chidiki diki; kune rimwe divi, iyo yakachengetedzwa ichikanda yepakutanga pamusoro inobatsira kuchengetedza kushanda kwepamusoro kwekukanda kwakadai sekumedza ngura uye kuneta kuramba. Nekudaro nekuvandudza hupenyu hwechigadzirwa.
(2) Kuumbwa uye kutonga kwe crystallization uye solidification chimiro
Maumbirwo emvura simbi, kuumbwa uye kukura kwekristaro nuclei, saizi, nongedzo uye morphology yekristaro zviyo zvakabatana zvakanyanya neyakaomeswa chimiro chekukanda, uye zvine simba rakakosha pane epanyama uye epamhepo zvimiro zvekukanda. Chinangwa chekudzora kuomesa chimiro chemakanzuru ndiko kuwana chimiro chaunoda. Kudzora kuomesa chimiro, zvinodikanwa kuti uve nekunzwisisa kwakazara uye kudzidza kwakadzama kwekuumbwa kwayo, maitiro ekuumba uye zvinokanganisa zvinhu. Maitiro akasimbiswa ekudzora maturu anoshanda anosanganisira kudzikira, inoculation, simba kugadzirwa, kuteedzana coagulation, uye nekukurumidza coagulation.
Mukugadzirwa kweanokanda, kudzora ari pamusoro maviri mativi kunogona kuve nechokwadi chechimiro uye chiyero cheakakanda, kudzikisa mutengo kune imwe nhanho, uye kushandira kubatsirwa kwemusika.